Diyaaradda Drones-ka Mareykanka ayaa dishay hoggaamiye sare oo ka tirsan Al-shabaab Bamka sameeya – Benaadirtv.com
Diyaaradda Drones-ka Mareykanka ayaa dishay hoggaamiye sare oo ka tirsan Al-shabaab Bamka sameeya
Mas’uuliyiinta Soomaaliya ayaa sheegay in duqeyntii diyaaradaha aan duuliyaha wadin ee Mareykanka ay Khamiistii dileen xubin sare oo ka tirsan kooxda argagaxisada ah ee Al-shabaab, saacado ka hor inta aysan hoggaamiyeyaasha dalku isku afgarteen qorshe doorasho oo soo socda kaasoo amniga qaranku uu noqon doono arrin weyn.
“Ciidamada Mareykanka ee taageeraya Ciidamada Qaranka Soomaaliyeed (SNA) waxay joojiyeen xubin sare oo ka tirsan kooxda argaggixisada ah ee al-Shabaab,” ayaa lagu yiri bayaan ay soo saartay dowladda Soomaaliya.
Weerarka cirka ayaa ka dhacay meel ku dhow magaalada koonfur-galbeed ee Kurtunwarey. Waxay bartilmaameedsatay Al-shabaab intii ay kooxdu isku diyaarineysay inay weerar ku qaado ciidamada dowladda Soomaaliya, ayaa lagu yiri bayaanka ay soo saartay Radio Muqdisho oo ay maamusho dowladda.
Sarkaal sare oo aan la magacaabin oo ka tirsan kooxda ka shaqeysa bambaanooyinka gudaha iyo unugta waxyaabaha qarxa ee IED ayaa lagu dilay, BTV waxaa u sheegay sarkaal sare oo Soomaali ah oo aan loo idman inuu warbaahinta la hadlo.
Ciidamada Mareykanka ee ku sugan Afrika ayaa iyaguna xaqiijiyay weerarka.
Qoraal lagu daabacay Taliska Mareykanka ee Afrika (AFRICOM) ayaa lagu yiri “Taageerada Dowladda Federaalka ee Soomaaliya, ciidamada Mareykanka waxay adeegsadaan habab badan oo wax ku ool ah oo ku habboon si ay gacan uga geystaan ​​badbaadinta dadka Soomaaliyeed.”
”Isaga oo kaashanaya la-hawlgalayaasheeda iyo ciidamada xulafada ah, Taliska Mareykanka ee Qaaradda Afrika wuxuu u shaqeeyaa maalin kasta si loo wanaajiyo xaaladaha amniga si kor loogu qaado dowladnimada iyo horumarka dhaqaalaha iyadoo laga hortagayo rabitaanka Al-shabaab ee ah in la ballaariyo gaaritaankooda iyo qalalaasaha kale.”
Marka la xaqiijiyo AFRICOM, Militariga Mareeykanka ayaa soo wariyay in bartilmaameedka “uu leeyahay taariikh sameynta waxyaabaha qarxa” waxaana lagu soo warramey in uu ku shaqeynayay sidii uu ku meeleeyay aaladaha qarxa waddo dadweyne oo ku dhow Kurtunwarey waqtiga ls diley.”
Weerarka cirka ayaa imanaya iyadoo kooxda xagjirka ahi ay iskudayaan inay dib ula wareegaan Kurtunwarey, oo ah magaalo istiraatiiji ah oo ay gacanta ku hayaan ciidamada Soomaaliya ee Midowga Afrika oo ay taageerayaan todobaad ka hor. Ciidamada isku dhafka ah ayaa sii daayay tobaneeyo carruur ah.
Heshiiska doorashada Soomaaliya
Weerarka hawada ayaa yimid saacado kadib markii Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C / llaahi Farmaajo, uu heshiis goor dambe oo Khamiista ah la galay saddex hoggaamiyeyaal maamul gobolada ah oo ku saabsan qaabka doorashada cusub ee 2021-ka. Doorashada ayaa loo arkaa inay tahay talaabo muhiim u ah xasilinta dalka iyo jabinta xagjiriinta.
Heshiiska – oo lagu gaadhay Dhuusamareeb, oo ah magaalo-madaxda dowlad-goboleedka Galmudug – ayaa timid kadib wareeggii saddexaad ee wadahadallada. Waxaa saxiixay Farmaajo iyo madaxda maamullada Galmudug, Koonfur Galbeed iyo Hirshabelle iyo sidoo kale guddoomiyaha gobolka Banaadir.
Saxiixayaashu waxay ku heshiiyeen in la sameeyo aasaasaha doorashada, iyada oo mid walba oo ka kooban 301 ergo ay u codeyn doonaan kursi baarlamaanka. Ergooyinka waxaa si wada jir ah u magacaabi doona hay’adaha doorashada heer qaran iyo heer federaal. Mudanayaasha baarlamaanka, ayaa iyaguna dooran doona madaxweynaha.
“Hoggaamiyayaashu waxay isla garteen in guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka Qaranka, oo kaashanaya dowlad goboleedyada, ay fududeeyaan sameynta guddi xulitaanka dhammaan odayaasha iyo bulshada rayidka ah ee bulshada kursi wadaagga ah,” ayaa lagu yiri war-murtiyeed lagu shaaciyay qorshaha.
Jubaland iyo Puntland – oo ah labo kamid ah shanta dowladood ee xubnaha ka ah federaalka – qeybna kama ahan heshiiska.
Isaga oo ka hadlaya xaflad Jimcihii lagu soo gabagabeeyay lixda maalmood ee kulanka, ayuu yidhi madaxweyne Farmaajo, “Waxaan u fidinaynaa gacan walaaltinimo kuwa aan wali ku soo biirin doonin dadaalkeena ku aaddan doorashooyin xalaal ah oo dimuqraadi ah.
Madaxweynaha ayaa yiri “Waxaan heshiis la gaarnay hoggaanka dowlad goboleedyada xubnaha ka ah federaalka iyo gobolka Banaadir, oo aan rajeynayno inay waddada u xaareyso doorasho xor, xalaal ah, xisbiyo badan iyo waqti ku habboon,” ayuu yiri madaxweynaha.
Sida ku xusan heshiiska, doorashooyinka ayaa ka dhici doona ugu yaraan afar degmo gobol kasta waxaana lagu qaban doonaa waddanka oo dhan isla maalintaas.
Somaliland, oo ah dawlad iskeed ugu dhawaaqday inay ka go’day dhul-weynaha Somalia, waxay yeelan doontaa doorasho dadban oo ay ku dooran doonaan goleyaasha gobollada inay soo doortaan xubnaha Aqalka Sare.
Heshiiska ayaa la gaadhay iyada oo cadaadiska bulshada ee caalamiga ah loogu talagalay in lagu qanciyo daneeyayaasha siyaasadeed in ay u midoobaan danaha Qaranka oo ay ku xalliyaan khilaafaadkooda iyada oo loo marayo is waafajin iyo isu tanaasul.
James Swan, oo ah wakiilka gaarka ah iyo madaxa UN UOM ee Howlgalka Kaalmaynta Soomaaliya (UNSOM) ayaa yiri “Waxaan fahamsanahay inay aragtiyo kaladuwan ay si aad ah uga dhex jiraan hogaamiyaasha, iyo xiisadaha siyaasadeed ay sare usocdaan xilligan doorashada.” Isagoo soo koobaya Golaha Amniga ee Khamiista Khamiista, Swan wuxuu raaciyay, “Hadana, waa si sax ah inta lagu jiro daqiiqadaha noocaas ah in ay aad ugu baahan tahay hoggaamiyeyaasha qaranku in ay wadahadal galaan.”
Sidoo kale Khamiista, Safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa soo saartay bayaan si adag loogu dhaariyay “dhinacyadu waxay u baahan doonaan inay horay ula socdaan qaabka [waqtigii loogu talagalay] ee lagu heshiiyay.”
Waxay sheegtay safaaradu inay ka shaqaysay sidii loo dar dar gelin lahaa dhamaan kaqeyb galayaasha. Bayaanka ayaa lagu yiri: “Qaswadayaasha waxay diidaan kaqeybgalka inay u huraan dimuqraadiyada dantooda gaarka ah.”
Previous Previous post: The steps to Dhuusamareeb 4 & the 2020/21 Election – Analysis
Next Next post: Puntland denies hijacking of its shores